Izute ikpeazụ Ijipt queen n'ihe mere n'oge gara game of Cleopatra Plus na njem oge igwe iru oge ochie Egypt. Cleopatra Plus bụ akụkụ nke usoro nke Cleopatra ohere mpere e mere na mepụtara site na mmepe nke International Gaming Technology dabeere na London. The egwuregwu na-enye ọtụtụ captivating ịkpata nhọrọ Player ma si otú IGT na-ịkpata nnukwu nke usoro isiokwu a nke ohere mpere.
IGT na-headquartered na London na ya bụ isi itieutom ke Providence, Las Vegas nke bụ a Ịgba Cha Cha ehiwe, na Rome. Nke a na nzukọ na-arụ ọrụ na ihe karịrị 100 mba gafee ụwa na oto ke mme onodu aku na uba ọnụ ọgụgụ na ụba nke ego na aka, o nwere ọtụtụ bonus nhọrọ na-enye aka egwuregwu na egwuregwu kere ha. Nke a ụlọ ọrụ na-emepụta ụdị dị iche iche nke Ịgba Cha Cha technology tinyere oghere egwuregwu n'ihi online na offline casinos.
Cleopatra Plus nwere 5 -esi anwụde na 40 paylines na-awa ka egwuregwu. E nwere ọtụtụ payout nhọrọ n'ụdị bonus atụmatụ na egwuregwu a.
Larịị Up Feature- A na-ahapụ ndị player irite dị ka àgwà na oge nke game ọ na-arụ, nke na-ahapụ ya kpọghee ekwt ọkwa dị elu.
daashi Map- -Enye player a na-edu map nke e ji mee mgbe Cleopatra bonus na-arụ ọrụ. Ọ na-enye free spins.
Free spins daashi- -enye 5 free spins na a 1x multiplier
Cleopatra daashi- Site n'enyemaka nke bonus map, i nwere ike imeri ruo 30 ọzọ free spins na ruo 5x multiplier ma ọ bụ 10 super spins na a 50x multiplier. Ma, ọ nile dabeere n'ụzọ dị na i unlocked.
Cleopatra, ịbụ anụ na stacked ọhịa, awards kasị elu na-agbata n'ọsọ nke egwuregwu ma ọ bụrụ na i nwere ike inwe 5 nke ha ọnụ na payline. The stacked wilds dịkwuo Ohere nke mmeri n'ihu. The 2 wilds-enye a 2x multiplier mgbe ha na-stacked.
The egwuregwu nwere a laghachiri player pasent nke 95% nke bụ nnọọ ezigbo.
Isi ihe na-egwuri egwu na ịkpata nnukwu payouts si Cleopatra Plus bụ na-egwu ya ihe na ọzọ n'ihi na ị na-aghọtaghị nke ọma na iwu. The egwuregwu ka jisiri jidere uche nke egwuregwu gafee ọbụna na ala graphic àgwà na n'agbanyeghị eziokwu ahụ akara na-adịghị fancy na ihe ịkọ isiokwu nke oge ochie Egypt.